Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT2 - Boky Torolàlana +
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa notsorina.
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT2
Posted byfazlul Oktobra 24, 2020 Desambra 4, 2020 Leave a comment ao amin'ny Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT2
Home » Haylou » Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT2
Modely: Haylou GT2
2 Inona no ao amin'ny boaty
3 Ahoana ny fomba fitafy?
4 Ahoana no fomba hiampangana
9 Ampamoaho ny raharaha
11 Orinasa fikojakojana isan'andro
12 ny fampitandremana aorina
13 Fananganana orinasa
14 Audio ihany no avoakan'ny earbud tokana
15 Olana hafa amin'ny famahana
16.1 Boky Torolàlana mifandraika
Inona no ao amin'ny boaty
Eartips * tsiroaroa 3 (apetraka eo amboniny ny vodin-tany), earbuds, casing charge, kabla famandrihana, boky torolàlana ho an'ny mpampiasa.
Parameter fototra (earbuds)
Sehatra fiasa: 10m (toerana malalaka tsy misy sakana)
Batterie capacité: 43mAh (earbud tokana)
Fotoana famakiana: eo ho eo 2hr
Fotoana miresaka: eo ho eo 3.5hr
Fotoana iaretana: eo ho eo 150hr
Parameter fampidirana: 5V 100mA
Karazana bateria: li-ion
Dikan-ny Bluetooth: v5.0
Parameter fototra (tranga famahana)
Parameter fampidirana: 5V 500mA
Parameter output: 5V 150mA
Fotoana iaretana: eo ho eo 4 volana
Battery fahaiza-: 380mAh
Ahoana ny fomba fitafy?
Azafady mba ampifanaraho amin'ny vavanao ny Mic mba hahazoanao traikefa fiantsoana tsara kokoa.
Ahoana no fomba hiampangana
Ho an'ny fampiasana voalohany, azafady esory ny sticker amin'ny tranga ary apetaho ny earbuds.
Raiso ny earbuds amin'ny tranga hampiasana azy ireo. Raha ivelan'ny tranga ny earbuds dia tazomy ny MFB ho an'ny 1.5s hampandehanana azy ireo (LED manjelanjelatra mandritra ny 1 s).
Ampidiro ny sofin-tsofina hanenjehana azy ireo. Tazomy ny MFB mandritra ny 4.5 taona mba hamonoana azy ireo. (LED mamirapiratra mena mandritra ny 2s).
Auto fifandraisana: maka earbuds roa amin'ity tranga ity, hampiasa herinaratra izy ireo ary hifanaraka amin'ny 3s. Rehefa manjelatra fotsy miadana fotsy ny LED amin'ny earbud ankavanana, tadiavo ny Haylou-GT2_R ary kitiho ny telefaona finday hampifandray ny sofina roa amin'ny finday.
Raha tsy mifandray amin'ny telefaona finday ny earbuds, azafady apetraho indray izy ireo raha tsy izany ary avereno ireo dingana etsy ambony.
Earbuds dia hifandray amin'ny fitaovana farany ao anaty rakitsoratra fifandraisana, raha misy izany. (Mila hahetsika ny mpampianatra Bluetooth
Fanamarihana: GT2 dia napetraka ao amin'ny orinasa alohan'ny fandefasana azy.
Pairing amin'ny tanana: fahefana o earbuds avy eo manindry tanana azy ireo. Earbuds dia hiara-miasa amin'izy samy izy rehefa manjelatra fotsy miadana fotsy ny LED eo amin'ny earbud ankavanana. Amin'ny finday, tadiavo ny GT2_R ary kitiho raha hampifandray ny sofina roa amin'ny finday.
Auto Connection: raiso na ny sofina amin'ny raharaha. Ny earbud dia mandeha ho azy ary ny LED dia hiverina fotsy tampoka avy eo. Amin'ny telefaona finday, tadiavo ny Haylou-GT2_R / L ary kitiho ny fampifandraisana ny earbud amin'ny finday.
Earbud dia hifandray am-paosy amin'ny fitaovana farany amin'ny rakitry ny fifandraisana, raha misy izany. (Mila hahetsika ny mpampianatra Bluetooth).
Fanamarihana: handany fotoana bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny earbud ankavia amin'ny finday.
Pairing amin'ny tanana: alao ny earbuds avy eo ampiasana tanana amin'ny earbud na tanana. Rehefa manjelatra fotsy miadana fotsy ny LED amin'ny sofina dia tadiavo ny Haylou-GT2_R / L ary kitiho ny telefaona finday raha te hifandray.
Ampamoaho ny raharaha
Ampamoaho amin'ny alàlan'ny tariby USB ny raharaha. Ny LED dia hamirapiratra mena mena rehefa mamaly ary mihodina o tampoka indray mandeha.
Orinasa fikojakojana isan'andro
Aza mba mandro amin'ny sofina. Aza mitafy azy ireo amin'ny andro orana. Aza avela ao anaty milina fanasan-damba na toe-javatra faran'izay mafy izany. Diovina amin'ny lamba maina izy ireo aorian'ny fampiasana fiainana maharitra.
ny fampitandremana aorina
Alefaso azafady ny vokatra, raha sanatria tsy nampiasaina nandritra ny tapa-bolana.
Mampiasà charger efa voamarina azafady.
Aza manao earphones mandritra ny fotoana maharitra mba hiarovana ny fandrenesanao.
Aza manao écouteur amin'ny toe-javatra mety misy atahorana mety hampihena ny fiheveranao ny any ivelany ny fanaovana azy.
Raha tsy mandeha tsara ny écouteur dia jereo ireto dingana manaraka ireto hamerenana amin'ny laoniny ny ozinina: esory ny earbuds amin'ity tranga ity. Power o ny earphones avy eo tazomy ny MFB amin'ny rindrambaiko roa mandritra ny 15 taona eo ho eo (ny LED dia hidy mena sy fotsy intelo indroa). Aorian'izany dia avereno ao amin'ilay raharaha izy ireo. Hamafa ny rakitsoratra fifandraisana amin'ny telefaona finday alohan'ny handefasana pairing hafa (Ny rakitsoratra rehetra mifandraika amin'ny earbuds dia hesorina avokoa).
Audio ihany no avoakan'ny earbud tokana
Tranga tsy fahita firy io. Azafady mba avereno jerena ny sofina, esory ny rakitsoratra mifandray amin'ny findainao ary ampifandraiso indray ny sofina amin'ny telefaoninao.
Olana hafa amin'ny famahana
Mamirapiratra fotsy matevina mandritra ny 1 minitra ny LED rehefa tampenana ny earbuds.
Ny tratra mitondra dia tsy handidy earbuds, raha miala ny bateriny. Ny jiro amin'ny kitapo mitondra dia ho faty raha vao tampina ilay tranga. Raha andoavanao azy indray dia tsy hanome fampandrenesana ny LED, izay tsy midika hoe tsy voampanga ny raharaha.
Alohan'ny hampiasana ny headset dia mba vakio tsara ilay boky torolalana ary tazomy mba hojeren'ny ho avy.
Ny headset dia mila ampiakarina tanteraka alohan'ny fampiasana voalohany
Raha avela tsy ampiasaina mandritra ny tapa-bolana mahery ny lohan-doha, azafady avereno tsindraindray.
Ampiasao azafady ny charger vita amin'ny mpanamboatra mahay.
5 Raha tsy hitan'ny telefaonanao ny headset dia mba jereo raha ao anaty pairing mode izany; raha tavela tsy mifandray elaela ny headset dia hivoaka amin'ny fomba fampifangaroana, azafady miditra ny maody; fa misy ny lesoka momba ny fafa amin'ny findainao, avereno izy raha misy hadisoana amin'ny headsetoccurs, avereno na avereno.
Address: Suite 1303,1305 sy 1306,13 / F, Tetikasa Tetikasa 2 an'ny Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 Longiii Road, Zhouxi Community, Distrikan'i Nancheng, Tanànan'i Dongguan, Guangdong, Sina.
Manufacturer: Dongguan Liesheng Electronic CO., Ltd.
Ireo akora mampidi-doza sy ny atiny ao amin'ilay entana
Fanamarihana: Azafady mba alamino ny fampiasana fotoana mety satria mety ho simba ny fandrenesanao amin'ny fampiasana ilay fitaovana mandritra ny fotoana maharitra.
12 volana aorian'ny fividianana (azafady tazomy tsara ny tapakila azonao)
Raha misy lesoka kalitao mitranga mandritra ny vanim-potoana fiantohana dia azafady raiso ny tapakila ary mifandraisa amin'ny mpizara anao amin'ny serivisy aftersales.
Ny tranga manaraka na ny fahasimbana / lesoka izay tsy noho ny olan'ny kalitao dia tsy voarakitra ao anaty fiantohana.
Izay lesoka na fahasimbana ateraky ny loza voajanahary, ny herinaratra tsy ara-dalàna na ny zava-misy eo amin'ny tontolo iainana.
Ny fanaparitahana, fanovana na fanovana ampahany tsy nahazoana alalana.
Ny fahasimbana ateraky ny fampiasana tsy ara-dalàna ny vokatra ao anatin'izany ny famonoana, fanosihosena, fianjerana, famoretana na fihenan'ny hafanana na hamandoana tsy mahazatra.
Fanontaniana momba ny Boky Torolàlana ho anao? Alefaso amin'ny hevitra!
Boky Torolàlana mifandraika
Boky torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou T15 TWS BT Earphones Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou T15 TWS BT Earphones Overview Inona no ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou T17 USER MANUAL Modely Earbuds tsy misy tariby: Haylou T17 Topimaso Ahoana ...
Boky manual an'ny mpampiasa Haylou Smartwatch MANUAL MANERANA Haylou Smart Watch Overview Inona no ao anaty boaty ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT1 Pro TWS Earphones USER MANUAL TWS Earphones Haylou GT1 Pro Overview Inona no ao ...
Boky Torolàlana momba ny Earl Haylou GT1 TWS BT Haylou-GT1 TWS BT Earphones Manual Overview Charging Case Inona no ao ...
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou GT1 TWS Bluetooth Earbuds User Manuals TWS BT EarphonesHaylou-GT1 Overview Charging Case Inona no ao ...
Posted byfazlul Oktobra 24, 2020 Desambra 4, 2020 Posted inHaylouTags: GT2, Haylou, TWS BT Earphones
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa Haylou T17
Boky Torolàlana ho an'ny Mpampiasa Onn Soundbar
HIKVISION Manual Network Manual an'ny mpampiasa DZ Speed ​​Dome
MONOPRICE 23 Torolàlana ho an'ny arinaotika fandrahoana arina
Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa HyperX QuadCast S
emllc Toro-làlan'ny mpampiasa fanasana lovia feno Farberware
G. on Boky Torolàlana momba ny Thermostat Honeywell Pro Series
mariana on Boky torolàlana an'ny mpampiasa Redmi AirDots Wireless Bluetooth Headset
Hamilton on Boky Torolàlana Mini Home Google
Manuals +, Pireharehana Powered by WordPress.